ထိုးမုန့်၊ ကရေကရာ၊ လမုန့် – Thet Nandar
ထိုးမုန့်၊ ကရေကရာ၊ လမုန့်
Posted on December 13, 2009 by Thet Nandar
ကြံတိုင်းအောင် ခုနှစ်လွှာ ပေါက်စီ (တစ်လုံး = 400 ကျပ်)
ငရုတ်ဆီက အမှတ်တရ ပါ။ မစားပါဘူး။
၀က်ချိုချဉ်ကြော် (ဒါလည်း ၀ယ်စားတာ)
မန္တလေး က မုန့်များက အမျိုး … ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီးက ပြခန်း ဆင်ပီး အပြန်မှာ ၀ယ်လာပေးတဲ့ မန္တလေး အပြန်လက်ဆောင်မုန့်တွေပါ။
2 thoughts on “ထိုးမုန့်၊ ကရေကရာ၊ လမုန့်”
မုန့်တွေက သွားရည်ယိုချင်စရာ… ဝက်တွေလဲ ကြိုက်တယ်… အခုတလော ပြန်ခါနီး သိပ်မအားလို့ လွတ်သွားတာလေးတွေပါ ပေါင်းဖတ်သွားတယ်…. ရန်ကုန်ကို ၁၆ရက်နေ့ညရောက်မယ်သိလား…. အခြေအနေပေးရင် သက်နန္ဒာမိသားစုနဲ့တွေ့ချင်သား….
၁၆ ရက်ညဆိုတော့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးညပေါ့။ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှာ အဲဒီနေ့လူအရမ်းများတယ်လို့ ပြောတယ်။
တွေ့မှာပါ။ ဟိုသွား ဒီသွားရင်းနဲ့ကို မနော်ဖော်တို့ မိသားစုနဲ့ ဆုံကို ဆုံနေမှာပါ။
ကျွန်မတို့က ဘားလမ်းက ဧမာနွေလမှာ မနက် ၈း၃၀ ဘုရားကျောင်းတက်တယ်။ တခါတလေ 43း0 တက်တယ်။
ကျွန်မတို့တွေ ရွှေပုစွန်၊ ကရ၀ိတ် နဲ့ shopping mall, Game Centerတွေမှာ ပတ်နေမှာပါ။ ဟီး ဟီး
၁၈ ရက်က အိန်ဂျယ်ကျောင်း ကပွဲ၊ 19 ရက်က အမေ့ ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် မို့ ၃၃ လမ်းအိမ်မှာ ဆွမ်းကျွေး၊ ၂၃ ရက်က ILBC Fun Fair.
24 ရက် ည က ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း စိန်မေရီ ဘုရားကျောင်းမှာ။ 25 ရက် မနက်ဖက်လည်းရှိချင် ရှိပါမည်။
မနော်ဖောတို့ မိသားစုတွေ မြန်မာပြည်ပြန် ခရီးစဉ်တွေ အစစ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ။ ခြင်လည်း ဂရုစိုက်နော်။ နေ့လည်ဖက်ခြင်တွေ။ နေပူထဲသွားတာ၊ လူကြားထဲသွားတာ ဂရုစိုက်ပါ။ ကျန်းမာနေတော့ လျှောက်လည်ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေလို့လေ။
Previousမန္တလေး ထိုးမုန့်
NextAngel’s Classroom X’mas Cake